नेपालगञ्ज–पोखरा उडानका यात्रु बढेसँगै व्यवसायी उत्साहित – NepalayaNews.com
१० चैत्र २०७७, मंगलवार १५:२२
काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित केही समयअघि शुरु गरिएको पोखरा–नेपालगञ्ज उडानमा यात्रुको संख्या बढ्न थालेपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल एशोसिएशन अझ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेण्टस् (नाट्टा)को टोलीसहित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशम्शेर जबरासहितको जनप्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायी सीता एयरलाइन्स चार्टर उडानबाट पोखरा आएर यसको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसयता हप्तामा दुई दिन मात्र उडान हुँदै आएकामा यात्रु संख्या बढेपछि अहिले हप्तामा तीन दिन उडान हुन थालेको छ ।
पोखरा–नेपालगञ्ज सिधा उडानसँगै यात्रुको संख्या बढेपछि अहिले यस क्षेत्रका व्यवसायीले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘गण्डकी नाट्टा र नेपालगञ्ज नाट्टा च्याप्टरको संयुक्त प्रयासबाट उडानको शुरुआत गरेका थियौँ, अहिले यात्रुको संख्या बढिरहेको छ’, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जकान्त सिग्देलले भने ।
देश दर्शन कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर हप्तामा दुई दिन शुक्रवार र आइतवार भइरहेको उडान यात्रुको संख्या बढ्न थालेपछि बुधवार पनि थपेर तीन दिन बनाइएको सिग्देलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भारतसँगको नाका खुलेसँगै भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर नेपालगञ्जबाट पोखरा हुँदै जोमसोमसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको लागि अन्य एयरलाइन्ससँग पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले पोखरा र आसपासबाट अधिकांश टोली बाँके, बर्दिया र रारा तालको ‘टुर प्याकेज’मा जाने गरेको सिग्देलले बताए ।
नाट्टा नेपालगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले पनि उडान सेवा पुनः सञ्चालनसँगै यात्रुलाई निकै सहज बनाएको बताए । ‘लामो समयपछि एउटा प्रयासको शुरुआत गरेका थियौँ, यसले सकारात्मक नतीजा दियो’, सिग्देलले भने, ‘अहिले यात्रुको संख्या बढ्दै गएको छ, यसले हामी निकै उत्साहित छौँ ।’
अहिले जसरी यात्रुको संख्या बढ्दै गए उडान सङ्ख्या फेरि बढाउनु पर्ने भनाइ उनको छ । ‘अहिले अग्रिम बुकिङ शतप्रतिशत हुन थालेको छ, यसरी नै यात्रुको संख्या बढ्यो भने उडान पुनः थप्नुपर्छ’, सिग्देलले भने । विशेषगरी गण्डकी धौलागिरिबाट बाँके, बर्दिया बसाइसराइ गरेर आएकालाई यस उडान सहजताले आफन्तजनसँग भेटघाट गराउनेदेखि आफ्नो जन्मथलोसम्म पुर्‍याउने गरेको उनको भनाइ छ ।
पोखरा र आसपासका आन्तरिक पर्यटक बाँके, बर्दिया र रारा तालसम्म आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको र आगामी दिनमा यसको संख्या अझै बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
उनका अनुसार यसबीचमा बाँके, बर्दियाबाट केही विदेशी पोखरा घुम्न गएका छन् भने भारतीय पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले सीता एयरको हप्तामा तीन दिन १८ सिटको जहाजबाट सेवा दिइरहेको छ । जहाजको भाडादर यसअघि रू. पाँच हजार थियो भने भाडा वृद्धिसँगै रू. पाँच हजार २०० बनाइएको छ । रासस
विश्‍वराज बास्तोला वोर्ड सदस्य मनोनयन । १० चैत्र २०७७, मंगलवार १५:२२
ज्ञान, बुद्धि विवेक र संघर्षका सागर बुद्धिसागर १० चैत्र २०७७, मंगलवार १५:२२
अफगानबाट फिर्ता हुँदै अमेरिकी सेना, हलो कहाँ अड्कियो ? १० चैत्र २०७७, मंगलवार १५:२२